Isikhokelo sokuGqibela ekuThatheni eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Isikhokelo sokuGqibela ekuThatheni eYurophu
Kwihlabathi liphela, Ukupakisha kuneziphumo ezahlukeneyo nezenzo, umzekelo: Ukucebisa eMzantsi Afrika kuyafuneka, njengoko kunjalo kwi i-USA. Kulindeleke ukuba ushiye inqaku phakathi 15 yaye 25% eMelika, kwaye ukuba awungekhe ugxothwe ngumlindi onomsindo. Kodwa kuthekani ngeYurophu? Iibhili ezininzi eYurophu ziya kubandakanywa neengcebiso, kunjalo, Oku kwahluka ngokwamazwe. Ukwazi iindlela zokungena kwilizwe lakho oluya kulo kuya kuthintela ukudideka kunye neemvakalelo ezimbi. Ke funda kwisikhokelo sokugqibela sokufumana inqaku eYurophu!
Isikhokelo sokuGqibela ekuTheni iYurophu ngeNkonzo
Iingcebiso eYurophu ngokubanzi ziyahluka kuxhomekeka kuhlobo lwenkonzo oyifumanayo. Umzekelo, Uya kulindeleka ukuba ukhankanye umntu olinda kwindawo yokutyela eneenkwenkwezi ezintlanu kwisiseko esahlukileyo kwiserver ngasemva kwikhawuntara. I-Bartenders ayinakulindela inqaku nakanye, apho abaqhubi beteksi bangenza. Sebenzisa ukuqonda kwakho, kwaye isisa sisoloko siyindlela elungileyo yokuhamba xa usenza isigqibo malunga nenqaku elichanekileyo. kwakhona, Iindawo ezininzi zifuna ukuba ukhuphe imali, ke qiniseka ukuba uphethe amanqaku ambalwa e-Euro kuwe ngalo lonke ixesha.
Ukucebisa ngaphakathi e
Nayiphi na imeko apho ukutya okanye iziselo ziziswe etafileni zidla ngokufuna incam. Isixa sixhomekeke kuhlobo lokutyela olukonwabisayo. Inkqubo esemgangathweni yokukhupha inqaku eYurophu kukushiya amatyala enye okanye ezimbini ze-Euro ngaphezulu kwenani lebhili ukuba akukho ziselo kodwa akukho kutya kuyalelwayo.. Ukutya okugcweleyo kwindawo yokuhlala-phantsi kwahlukile. Kule meko, a few euros per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. Qiniseka ukuba ujonga oku njengoko kungekho mfuneko yokushiya inqaku elongezelelweyo ngaphandle kokuba uyonwabele kakhulu inkonzo yakho. Inkonzo egqwesileyo ngamanye amaxesha ifuna ingcebiso eyongezelelweyo, ke kwezi meko, ungahamba yonke indlela ukuya 15%.
Uninzi lweebhloko okanye imivalo kwilizwekazi lilonke musa ukulindela iingcebiso. I-Bartenders ihlawulwe umvuzo, kwaye ngelixa iingqekembe ezimbalwa kwimbiza yesipu ziya kuthakazelelwa kakhulu, ayimfuneko. ukuba wenza ingcebiso, kwakhona khumbula ukusebenzisa imali kuphela, nokuba ziinowuthsi okanye zemali. Kwimeko apho ufikelela kwisiphelo esikhulu nantsi uluhlu lwe 5 NeeBhari Best With Live Umculo EYurophu.
Izitayile kunye neGrace's
Uninzi lwabantu lufuna ukufumana i-hairdo entsha entsha, okanye ukwenza umthambo wokuphumla ngelixa sikwiholide. Luckily you will find spas and stylists all over Europe, rhoqo phantse kuzo zonke iidolophu. Ukucebisa, kuzo zombini iimeko, ihlala isisiipesenti ezilishumi. Ukuba wonwabile kakhulu ngenkonzo oyifumeneyo, ungaya phezulu 15%.
Iihotele ngumbuzo oxhaphakileyo xa kuziwa kumbuzo wokungena eYurophu. Njengomthetho wesithupha, umntu kufuneka aqhubeke elandela isikhokelo se-Euro enye. Oku ngokusisiseko kuthetha ukuba ushiya i-Euro enye kwiingcebiso ngenkonzo nganye. Ukuba i-bellhop okanye i-porter ithwala iingxowa zakho, ke i-Euro enye ngengxowa nganye yanele. Ukucoca indlu kufuneka ifumane i-Euro ngosuku. Ukucebisa i-Concierge yakho ngokokubona kwakho, kodwa kuya kuxhomekeka kwinqanaba lenkonzo oyifumeneyo. Ukuba baye ngaphezulu kwaye ngaphaya koku bangahlala uhlala ukhumbuleka kwaye kumnandi, then a tip of five to ten euros or even beyond is appropriate.
Iiteksi kunye nee-Ubers yinxalenye engaphakathi yokuhamba ngeYurophu. Xa ukhetha into oza kuyiphetha, kungcono ukugcina engqondweni ukuba umqhubi uhlawulwa njani. Ngokubanzi, nakuba, itiphu ezimbini ze-Euro ngeteksi emfutshane okanye ukukhwela u-Uber kufanelekile. Iiapps ezinjenge-Uber zikuvumela ukuba ukhuphe umqhubi ngombane, ngelixa iiteksi ezihlawulwa ngemitha ziya kufuna imali. Ukucebisa abantu eYurophu ngelixa useluhambeni kuyafana nokufaka iibha okanye iresityu. Khumbula ukuba akusoloko kuyimfuneko, but often appreciated. Ukubhukisha amatikiti akho kaloliwe ngenxa yakho uhambo European is simple and easy with The Cheapest Train Tickets Website In The World.
Isikhokelo sokuGqibela ekuThatheni eYurophu NguLizwe
Uninzi lwamazwe lulandela izikhokelo ezifanayo ngokubanzi xa kuziwa ekunikezeleni eYurophu. Kanjalo, enye kufuneka ihlale phanda ngendawo oya kuyo Ngaphambi kokuba uhambe ukuze uqiniseke ukuba uphezulu ngokupheleleyo. zokuhamba Qeqesha inokuhlala ikusebenzisa kumazwe aliqela ngexesha elinye, ke ukuqiniseka ngokuchanekileyo ngento ekufuneka uyenze kuyo nganye ihlala iluncedo. Amanye amazwe ahlukile kubalingane bawo ngokwemigaqo yemigaqo, kunjalo.
I-Iceland kunye neScandinavia
Nokuba yinto ephosayo kwimvelaphi yabo yeViking okanye ulula nje, la mazwe akhetha ukuba ungancami kwaphela. Uninzi lweeresityu kunye neenkonzo ziya kuba nenqaku elibandakanyiwe kwityala. It is still appropriate to round the bill up to the nearest Euro instead of a tip either via cash or credit card.
AmaGrike enza yonke into ngokwahlukileyo ngokwahlukileyo, kwaye ukuncanca akukho nto injalo. Iibhulethi ezinkulu zifuna iingcebiso ezincinci kunye neebill ezincinci zifuna iingcebiso ezinkulu.
Shiya okungenani a 5% tip, ngemali ezinkozo iiseva, even if the bill includes gratuity. Cash is always king in most European countries, IOstriya ayifani.
Yaziwa ngobuhlobo babo, Zombini ezi ntlanga ziya kuphatha iibhegi zakho ngovuyo. Ukucebisa abagxothi bemithwalo akuyimfuneko, and is usually not expected. Ukuba nobubele kwaye uthi enkosi ngentlonelo, kunjalo, kulindeleke. Ukuba unqwenela ukufumana inkonzo efanayo kwikamva lakho, qiniseka ukuba ubamkela.
What To Tip In Europe – ulinganiso lweenkcukacha
Uninzi lwabantu baseBritane bazamile ukucacisa abakhenkethi ukuba ukuxhasa ukugcina indlu akuyimfuneko. Xa kuziwa ekunikezeni eYurophu, Le yeyona mithetho ingqongqo. Sukushiya ingcebiso kwigumbi lakho lehhotela, iya kunikezelwa kakhulu kwidesika yangaphambili njengealahlekileyo imali. I-Bartenders nayo ayilindelanga iingcebiso, kwaye ukuzikhuphela kunokuphikiswa. Ngandlela yonke, yiba nobuntu kwaye wamkele umntu oza kutshata naye. Beka iingqekembe ezimbalwa kwimbiza yenqaku ukuba ikhona. Ukuba akukho njalo, endaweni yoko shiya itiphu ngaphandle koncedo.
Ukujikeleza lonke uLwazi NgokuBhengeza eYurophu
Elona cebiso lilungileyo lokufumana amanqaku eYurophu kukwenza umsebenzi wakho wesikolo owenzelwa ekhaya. Funda konke malunga nelizwe, okanye amazwe ocwangcisa ukuwatyelela. khumbula oko Uhambo lukaloliwe luhamba rhoqo kumazwe amaninzi ukuze ukwazi ukuma apho. Soloko uzisa imali, zombini iingqekembe, and a few notes to tip in cash. Ukuba awuqinisekanga ngemigaqo-nkqubo, bambelela kumgaqo weshumi weepesenti kwiindawo zokutyela, and the one Euro rule for everything else.
Khumbula, Siyathanda ukukufundisa malunga nokuHamba, ke xa ixesha lilungile kwaye uthathe isigqibo sokuhamba, khumbula ukuba uTyelelo loLoliwe lukhethekileyo lwethu kwaye ukhethe Gcina A Isitimela, singathanda ukukunceda ukonwabele uhambo lwakho!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Isikhokelo sokuGqibela ekuThatheni eYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-tipping-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)